Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်)
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Polybact ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း၊ ကပ်ပါးပိုးကူးစက်ခြင်း၊ သွေးတွင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုတ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားပိုးကူးစက်ခြင်းနှင့် တခြားအခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Polybact Kit တွင် အာနိသင်ရှိပစ္စည်းအဖြစ် Clarithromycin, Omeprazole နှင့် Tinidazole တို့ပါဝင်၏။
Polybact Kit သည် ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေခြင်း နှင့် ပိုးဝင်ခြင်းကို လျော့ချပေးပါသည်။ အစာအိမ်အတွင်း အက်စစ်ထုတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။ ဘက်တီးရီးယားများ၌ ပရိုတင်းထုတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး ဘက်တီးရီးယား ကြီးထွားမှုကို ရပ်စေပါသည်။
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသုံးပါ။ သို့မဟုတ် ဆေးတွင်ပါသော အညွှန်းစာအတိုင်း လိုက်နာပါ။
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Polybact ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Polybact ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။
Polybact ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Polybact အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးကိုမသုံးခင် သင်လက်ရှိသုံးနေသည့် ဆေးဝါးများ၊ အလွယ်ဝယ်လို့ရသည့်ဆေးများ (ဥပမာ – ဗီတာမင်၊ ပရဆေးများ)၊ အလက်ဂျီရှိမရှိ၊ အခံရောဂါရှိမရှိနှင့် လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ (ဥပမာ – ကိုယ်ဝန်၊ ခွဲစိတ်ရန် ရှိခြင်း စသည်)တို့ကို ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ။
တစ်ချို့သောကျန်းမာရေး အခြေအနေများသည် ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အခြေအနေက ကောင်းမလာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပါ။ ဆွေးနွေးရမည့် အရေးကြီးအချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးများ သုံးစွဲထားပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
သင့်၌ ကိုယ်ဝန် ဒုတိယနှင့် တတိယ သုံးလပတ်အတွင်းရောက်နေလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သွေးကျဲဆေးများဖြစ်သော ဝါဖရင်ဆေးများ သောက်နေရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးပြားများကို ဝါးခြင်း ကြိတ်ခြေခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
စက်ကိရိယာများ မောင်းနှင်ခြင်း ထိန်းချုက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Polybact Kit တွင်ပါသော ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးမှ ဖြစ်လာနိုင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အပြည့်အစုံတော့မဟုတ်ပါ။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုခြင်းသာ။ အမြဲတမ်းဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ တစ်ချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အဖြစ်နည်းသည်။ သို့သော် ပြင်းထန်နိုင်၏။
အောက်ပါတို့မှ တစ်ခုခုတို့ဖြစ်လာလျှင် အထူးသဖြင့် ပျောက်မသွားလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Polybact သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Polybact က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Polybact သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား ပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဤဆေးအား သမားတော်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆေးသုံးရမည့်ပုံစံသည် Polybact နှင့် ၎င်း၏ Kit ပုံစံအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဆေးပမာဏ အသေးစိတ် – သမားတော်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသာ သုံးရပါမည်။
ကလေးတွေအတွက် Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများ၌ အချိုးအစားဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုခြင်းအား အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်၌ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။)
Pylobact (ပိုင်လိုဘတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Polybact ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးတစ်ပြားတွင် အိုမီပရာဇိုးဆေးတောင့် ၂၀ မီလီဂရမ်၊ ကလဲရီသရိုမိုင်စင် ဆေးပြား ၂၅၀ မီလီဂရမ် နှင့် တီနီဒဇိုး ဆေးပြား ၅၀၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်ပါသည်။
Polybact ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Pylobact Kit, http://www.tabletwise.com/pylobact-kit Accessed November 15, 2016
MEDICATION: PYLOBACT, http://www.medicatione.com/?c=drug&s=pylobact Accessed November 15, 2016
Pylobact Drug Information, http://www.catalog.md/drugs/pylobact.html Accessed November 15, 2016
BUY PYLOBACT KIT 6, Ranbaxy PRICE & SIDE EFFECTS, http://buymedicinesx.com/buy-pylobact-price-side-effects/ Accessed November 15, 2016.